Lahatsary Maneho Gadra Nandositra Tamim-pitokiana Ilay Fonja An-tanàn-dehibe Tany Trinite · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2015 5:30 GMT
Dikasary iray avy ao anatin'ny lahatsary mampiseho ny fitsoahana azon'ny kamerà CCTV iray teo ivelan'ny Fonjam-panjakana any amin'ny Arabe Frederick, any amin'ny Seranantsambon'i Espana, Trinite. Navoakan'ny pejy Facebook “Beyond the Tape” io lahatsary io.
Nipoitra tao amin'ny media sosialy ny lahatsary roa mampiseho fitsoahana am-ponja tamin'ny Zoma 24/07 tolakandro tany amin'ny Seranantsambon'i Espana, Trinite.
Ny kamera CCTV no toa nahazo io lahatsary io, ivelany sy anatin'ny Fonjam-panjakana any amin'ny Arabe Frederick izay nitrangan'ilay fitsoahana, ary avy eo dia nalaina avy amin'ny fafanà solosaina—heno lasa lafika ny feon'ireo olona maka ilay lahatsary. Navoakan’ny Beyond the Tape, fandaharana iray amin'ny fahitalavitra maneho ny zava-misy mikasika ny heloka bevava ao an-toerana, tao amin'ny Facebook ireo lahatsary. Miara-misalahy amin'ny Sampan-draharahan'ny Mpitandro Filaminana Ao Trinite sy Tobago io fandaharana io mba hanomezana topimaso ambadiky ny sehatra ho an'ireo mpijery mikasika ny heloka bevava ao amin'ny firenena.
Ity lahatsary voalohany ity dia mirakitra ny faritry ny fidirana ao amin'ny fonja:
Tamin'ny fotoana namoahana azy, maherin'ny 17.000 ireo nijery ilay lahatsary ary maherin'ny 1.200 kosa ireo nizara izany. Nitsikera ny mpampiasa Facebook, Bryce N. Stowe:
1. Fonja ihazonana ireo mpanao heloka bevava faran'izay atahorana ao anivon'ny tanàna iray tena feno vahoaka marobe, “Piece Of Shit” (hila tsy ho vita ny misambotra ireo mpitsoaka satria afaka mandeha na aiza na aiza izy ireo & mahazo fitaterana amin'ny fomba tsotra).
2. Tsy misy miaramila mitam-basy eny amin'ireo teboka stratejikan'ny fonja (tahaka ny fivoahana).
3. Milaza ireo mpiasan'ny fonja fa diso iva loatra ny rindrina hany ka afaka manipy zavatra ho an'ireo gadra ny olona.
4. Roapolo taona mahery izao, miharatsy isanandro ny toe-draharahan'ny heloka bevava noho ny fananan'ireo gadra fahafahana mampiasa finday/aterineto an-taonany maro, nefa mbola tsy nisy fanelingelenana onjam-peo napetraka mandrak'androany any anatin'ireo fonjam-panjakana.
5. Mamela ireo gadra hitsoaka tahaka izao vao hitantsika izao ireo fotodrafitrasa zara fa vita.
Lavitrisa dolara maro no lany amin'ity nosy kely ity isan-taona. Inona no mba vitan'ny governemantantsika tanatin'ireo 15 taona farany?
Mihevitra ireo hafa mpampiasa aterineto fa mora loatra izany zavatra rehetra izany. Naneso i Junior Smith hoe “sahala amin'ny famotsorana am-ponja kokoa iny fa tsy fitsoahana ny fonja”, raha nametraka fanontaniana maro mitombina kosa i Krys Leisel:
Aiza ny ambin'ireo mpiambina am-perinasa? Taiza no nahazoan'ireo gadra ireo fitaovam-piadiana? Taiza no nahazoan'izy ireo ny akanjony maha olon-tsotra azy? Ahoana no nahafantarany hoe iza no nitazona ireo fanalahidin'ny varavarana? Angaha isika tsy manana antanan-tohatra izay manaitra ireo mpiambina rehefa nisy namaky ny tandavan'efitra iray? Ahoana no tsy nisy gadra maro hafa nanararaotra nitsoaka ihany koa??
Maminaviana ireo vitsivitsy mpampiasa aterineto fa mety asa avy ao anatiny izany.
Ilay lahatsary faharoa, azo avy eo ivelan'ny fonja, dia mampiseho ireo gadra mivoaka ireo vavahadin'ny fonja. Maherin'ny 38.000 ireo nijery izany ary maherin'ny 1.800 kosa ireo nizara azy tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra:
Toy izao kosa no andraisan'ny mpijery iray, Justin Thompson, ny fitrangan'ireo hetsika:
Ho an'ireo olona izay tsy mahatakatra …. araka ny lahatsary, nisy mpiasan'ny fonja 3 tao anatin'ilay fiara, gadra 3 tafatsoaka, raha nivoaka avy tao amin'ny vavahadin'ny fonja ireo lehilahy dia nitifitra, 1 tamin'ireo mpiasan'ny fonja no voatifitra, tamin'io fotoana nitifirany io ihany koa dia nisy 1 tamin'ireo lehilahy nanipy grenady tany amin'ny faritry ny mpamily, izay ny tenany ihany no mpiasan'ny fonja hany nahita ilay grenady, nivoaka ny fiara izy ary nihazakazaka naka zorony raha namonjy ny mpiara-miasa aminy naratra kosa ilay mpiasan'ny fonja iray hafa. Ilay mpiasa (mpamily) izay nihazakazaka naka zorony kosa niverina teo amin'ilay fiara ary tamin'io fotoana io dia namily ny fiara ho an'ny amin'ny toby fitsaboana
Amin'ny fotoana anoratana, na ny mpitandro filaminana, na ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena, na sampana iray hafa avy ao amin'ny fanjakana, dia mbola tsy nisy nitsikera ireo lahatsary ireo na nanamarina ny fisiany.